သံလွင်: ဇာဂနာ(ခ)ကိုသူရ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်
ဇာဂနာ(ခ)ကိုသူရ ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်
ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Amnesty International(AI) အဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ ဇာဂနာဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့အတွက် ဒီနေ့မှာတော့ ဗြိတိန်သျှသံရုံးမှာ ဗီဇာရယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်.. ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ(၃၁)ရက်နေ့ကနေဇွန်လကုန်အထိ ဗြိတိသျှနဲ့လန်ဒန်မြို့များကို သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ဝေလပြည်နယ်မှာပြုလုပ်မယ့် အနုပညာပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဟာသပညာရပ် တွေ့နဲ့ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထောက်ပံ့ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေပွဲတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအတွက် ဗြိတိသျှအနုပညာရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်..၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၉)ရက်မှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၆၇)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကျင်းပမယ့် အောက်စဖို့စ်မြို့ကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဇွန်လ(၂၁)ရက်နေ့မှာ လန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပါလီမန် အထက်/အောက် လွှတ်တော်မိန့်ခွန်းဟောပြောပွဲကိုလည်း သွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်.. ကိုဇာဂနာရဲ့ အနုပညာတင်ဆက်မှု ကိုတော့ ဗြိတိန်ရောက် ကိုထိန်လင်းက ပူးတွဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်…
at 5/28/2012 05:13:00 PM
▼ 05/27 - 06/03 (73)
ကမ္ဘာ့ဆံပင် အရှည်ဆုံး ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင် အမျိုးသမီး
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်း
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ကားခိုးသွင်းမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
သုံးလေးနှစ် အရွယ်ကတည်းက သီချင်းဆိုခဲ့တဲ့ (ဝိုင်းစု...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စရန် CPI ကြိုးစား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဒေါ်ယဉ်လတ်
သားစိုးနဲ့ ဖိုးချစ်တို့ရဲ့ ပညာဒါန
အလုပ်တော့ ရပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ :(:(
မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် Stock Exchange ပေါ်ပေါက်ရေး ...
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်နားရန် ညွှန်ကြ...
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီငါးခ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ခေါင်းဆောင်တချို့ WEF ညီလာခ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လတ်ရှနာဝတ်နှင့် ဒေါ်အာင်ဆန်းစ...
မြန်မာအလုပ်သမားများအရေး ထိုင်း ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့်...
ဥပဒေမဲ့ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ရပ်..........
ရန်ကုန်က လယ်သိမ်းခံများအတွက် ဆန္ဒပြမှု
ရဲတပ်ကြပ် တစ်ဦးရိုက်နှက်မူကြောင့် ဒေသခံ လူကြီးတစ်...
ပညာရေးလား ဓါးမြတိုက် ပညာပေးလား ! ! !
မျက်ရည်တွေကို ဖေးမကူပေးနေတဲ့ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ လက်
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နိုင်
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်ရောက် မြန်မာရွေ့ပြောင်းအလုပ...
ဟိုင်မို ဆံပင်တုစက်ရုံ အလုပ်သမား နစ်နာမှု ၈၈ မျိုးဆ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘိုနို က ဆုအပ်နှင်းမည်
ထိုင်းနယ်စပ်မျဉ်းနှင့်ကပ်လျက် တောင်ပိုင်း ဝ မြို့သ...
ငကန်းတွေ သေမှာ ကို စိုးသတဲ့လား … နောက်ထပ် ငစွေတွေ ...
အနာဂတ်လူသား၊ အနာဂတ်ခေတ်၊ အနာဂတ်ကမ္ဘာကို ပုံဖော်ထုဆစ...
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ၂ ဦး ဘန်ကောက်တွင် တွေ့ဆုံ
လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးရဲ့ မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပ...
ဘ၀အရှုံး မပေးတဲ့ ဒေါ်ငြိမ်းအေး
ဒီပဲယင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ ၊အညတရ ကျဆုံးသူများအတွက် အမှ...
ဒီငြိမ်းလင်းနဲ့ ရဲမြတ်ဟိန်းတို့ နေ့ကျောင်း ပြန်တက်...
စင်္ကာပူ ပိုလီ ၀င်ခွင့်အတွက် စဉ်းစားသွားမည်ဟု ဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟာချိုင် ရောက်ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ၆ ရက် အစီအစဉ်
ထိုင်းရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံများ)
မုံရွာတွင် အပူလွန်ကဲ၍ လွန်ဆွဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မေ ၃၀ ရက်နေ့ အစီအစဉ်များ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘန်ကောက်ကို ချောမောစွာ ရောက်ပြီ
လေးမြို.မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ပေး...
ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ ???
NLD ရဲ့ တောင်းပန်စာ
ဥပဒေများနှင့် ညိစွန်းတဲ့ အဖွဲ့
တာချီလိတ်တဘက်ကမ်းမှာ လက်နက်များ ဖမ်းမိ
လယ်ယာမြေပြန်ရရေး မေမြို့ လှုပ်ရှားမှု
အိမ်မဲတွင် အစာအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော...
နေပြည်တော်မှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဖွဲ့
စစ်ကုန်သည်ကြီးများအကြောင်း တစေ့တစောင်း အပိုင်း (၂)
၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်...
ကချင်သတင်းထောက် လဖိုင်နော်မိန်း ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရ
ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနိုင်မယ်
အမျိုးသမီး ၂ ဦး တိုက်ခန်းတွင်း မီးရှို့ခံရ
မသမာသည့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများအား အချိန်မဆိုင်း ထိရောက...
ကလေးမြို့တွင် ထွန်းသွင်ကုမ္ပဏီမှ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ေ...
အမေရိကန် လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် တွေ့ဆုံ
ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်က သွေးလှူဒါန်းပွဲ
ရွေညဝါ ဆရာတော် အလုပ်သမားတွေကို ဆက်လက်ကူညီ
ဂင်းနစ် စံချိန်သစ်များနှင့် မြန်မာ
ယခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုရှင် "လဖိုင်နော်မိန်း"